Ungazigcina njani iitawuli zakho ziBhetyebhetye kwaye zithambile - Ibath Linens
Ungazigcina njani iitawuli zakho ziBhetyebhetye kwaye zithambile
Akunzima ukugcina ukuthamba kunye nokuthamba kweetawuli. Gcina iitawuli ezintsha ukuze zingabi lukhuni kwaye zivuselele iitawuli ezindala kusetyenziswa amayeza aliqela.
Isithambisi ngoyena Menzi wobubi
Intsalela yesepha sesona sizathu siphambili sokulahla ukuthamba kwabo. Ukuba ufuna ukugcina iitawuli ezintsha zicocekile okanye uqaphele ukuba iitawuli zakho ezindala ziqinile kwaye azisathambile, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele kukuqokelelwa kwesepha ekubambeke ngaphakathi kwimicu yetawuli. Le ntsalela idityaniswa kukusetyenziswa kwezithambisi.
Gcina kupholile ngeeNjongo zokuHlala zasehlotyeni
Uzihlamba njani izilwanyana ezinempahla kwaye uzigcine zithambile
Uyihlamba njani uboya begusha kwaye ugcina ukuthamba kwayo
Ukunciphisa isixa sesithambisi
Xa uhlamba iitawuli zakho ezintsha, nciphisa inani oqhele ukulisebenzisa kumthwalo ukugcina ukuthamba kweetawuli. Ukuba iitawuli zakho zonke zilungile ziqinile, nciphisa inani olisebenzisileyo. Ixesha elingaphezulu, ukuba uyaqhubeka nokusebenzisa isepha encinci, uninzi lwentsalela luya kuhlanjwa ngetawuli yemicu. Ukuba oku akulungisi ukuqina kwiitawuli, kukho ezinye izinto ezimbalwa onokuzama ngazo.
Ungaze uhlambe iitawuli emanzini abandayo
Musa ukuhlamba iitawuli ezintsha emanzini abandayo okanye adikidiki. Amanzi abandayo enza ukuba kube nzima kakhulu ukuba isepha idilize kwaye ifunxwe ngamanzi. Xa uhlamba iitawuli emanzini abandayo, isepha ifunxwa yimicu yetawuli endaweni yokuxutywa namanzi. Isicoci emva koko sihlala kwimicu kwaye siqhubeke ukuseta ngobushushu obuvela kwisomisi. Iseti yokufudumeza iseti emva koko yenza iitawuli zentsimbi ziqine. Amanzi abandayo alandelayo okanye ukuhlamba okufudumeleyo kongeza isepha yokubasa ubushushu njalo njalo.
izinto oza kuzigcina kwisipaji sakho
Sebenzisa Amanzi ashushu okanye ashushu kuphela
Amanzi ashushu okanye ashushu ngawona maqondo obushushu afanelekileyo afunekayo ukuze kuphulwe isepha ukuze kucocwe ngokufanelekileyo. Abanye abantu baya kusebenzisa amanzi ashushu kuphela kwiitawuli kwaye nangaphambi kokuba bashushu. Bakholelwa ukuba ubushushu bamanzi ashushu kuphela kwendlela yesepha yokuxuba ngokupheleleyo emanzini. Iqondo lobushushu elishushu lenza ukuba iipropathi zokucoca isepha zisebenze kwaye zisebenze ngakumbi ekukhululeni ukungcola kunye nobunzima obubambeke kwimicu yetawuli. Hlamba iitawuli ezintsha emanzini ashushu kwaye uzigcine ngokuqhubeka noku kubomi beetawuli. Ukuba iitawuli zakho indala kwaye ziqinile, tshintshela ekusebenziseni amanzi ashushu ukuba ubusebenzisa ukubanda.
Vumela isepha kunye noMxube wamanzi
Enye indlela yokubetha ingxaki yesepha kukuvumela iwasha igcwalise ngamanzi ngaphambi kokulayisha iitawuli. Nje ukuba i-washer igcwele isiqingatha, yongeze ngesandla isepha yokuyivumela ixesha lokunyibilika. Nje ukuba i-washer igcwaliswe, beka umthwalo weetawuli kumatshini wokuhlamba. Oku kuyakuqinisekisa ukuba isepha ayifakwanga kwilaphu lokwenza itawuli.
Ilaphu lokuthambisa linokubangela iitawuli eziqinileyo
Ukuba uyalinciphisa inani lesicoci osisebenzisayo kodwa iitawuli zakho zisaphuma ziqinile, kukho enye into enokubangela ityala - isithambisi selaphu. Njengokungaqhelekanga njengokuvakala kwayo, iithambisi zodwa zinokubangela ukuqina kweetawuli. Kukho unobangela olula ofunyenwe ngaphakathi kwezithambisi ezininzi: abicah.
Iikhompawundi ezisekwe kwisilicone ezibandakanyiweyo kwizithambisi zamalaphu zongezwa njengendlela yokwenza imicu yetawuli ibophe ngokulula ngesithambisi. Ngelishwa, ekuhambeni kwexesha, iithambisi eziqulathe le nto zinokwenza amalaphu agxothe amanzi.
umbala olungileyo weenwele kumfazi oneminyaka engama-60 ubudala
Unyango lwemiba yokuThoba
Eli qhinga lincinci linokubuyisela ukuthamba kwiitawuli eziqokelele intsalela yesithambisi, ziphange imicu yokuthamba kwendalo.
Thambisa isithambisi rhoqo emva kweeveki ezimbalwa ngekomityi yeviniga emhlophe ecoliweyo. Qalisa lo mjikelo ngeetawuli ezintsha ukugcina ukuthamba kwazo kwaye uzibandakanye kwishedyuli yakho yokuhlamba nabantu abadala, nabo.
Enye indlela yokusebenzisa iviniga emhlophe kukuhlamba iitawuli okwesibini, kuphela ngaphandle kokusebenzisa isepha. Endaweni yoko, sebenzisa iviniga kuphela. Yongeza iikomityi ezimbini zeviniga emhlophe ecoliweyo kumjikelo wesibini wokuhlamba.
Inye okanye omabini la manyathelo kufuneka asombulule ukuqina kwiitawuli zakho. Nangona kunjalo, ukuba iitawuli zakho zisomelele, kusenokufuneka wongeze into enye yokugqibela - isoda yokubhaka.
Ukubhaka isoda eSika isepha kunye nentsalela yokuthambisa
Ngamanye amaxesha intsalela eqokelelweyo evela kwisicocisi kunye nesithambisi kunzima ukusika. Ukuba uzame onke la macebiso kwaye usenenkinga, lixesha lokuba uphume isoda yokubhaka.
Yongeza ikomityi enye yesoda yokubhaka xa uhlamba umthwalo weetawuli. Yongeza isoda yokubhaka kwisixa sokucoca oqhele ukusisebenzisa.
Ukuqhuma kokuGqibela ukuvuselela iTofile ethambileyo
Ukuba uziva iitawuli zakho zifuna indlela enobundlongondlongo yokuzihlaziya zithambe, ungasebenzisa iviniga yokuvasa kwangoko ilandelwe kukuhlanjwa okwesibini kwekomityi enye yesoda yokubhaka.
yintoni i-gluten yasimahla kwi-mcdonalds
Hlamba ngesiqingatha semali yesiqhelo yesepha.
Hlamba kwangoko okwesibini ngeekomityi ezimbini zeviniga. (Sukusebenzisa nasiphi na isepha.)
Landela umjikelo wesithathu wokuhlamba usebenzisa ikomityi enye yesoda yokubhaka. (Sukusebenzisa nasiphi na isepha.)
Le ndlela iya kuqinisekisa ukuba yonke intsalela yokwakhiwa kweekhemikhali iyakhululwa kwilaphu kwaye iitawuli zakho kufuneka ziphume zithambile.
Iingcebiso ezongezelelweyo malunga nokuhlamba iitawuli
Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzenzile ukuqinisekisa ukuba yonke imizamo yakho yokugcina okanye ukubuyisela ukuthamba kunye nokuthamba kwiitawuli zakho ziphumelele.
ungasusa njani amabala amadala abomvu kwikhaphethi
Sukongeza izinto ezingezizo ezitawuli kumthwalo wewasher.
Ukuba ugcwalisa ngaphezulu iwasha ngeetawuli ezininzi, isepha ayinakucocwa ngokwaneleyo. Oku kudala intsalela yokwakha eya kuthi iqhubele kwindawo yokuhlamba elandelayo. Ukuba uqhubeka ugcwalisa ngaphezulu umatshini wokuhlamba, ngumcimbi wexesha kuphela ngaphambi kokuba iitawuli zomelele.
Ekupheleni komjikelo wokuhlamba, gungqisa iitawuli ukuze ukhulule imicu emanzi ukuze yomile ngokulula kwaye ii-fiber loops azincitshiswanga. Gubungela itawuli ngamanye amaxesha ngaphambi kokuphosa kwi-dryer.
Isomisi sinokufaka isandla ekwenzeni iitawuli zakho ziqine. Kukho izinto ezimbalwa onokuzenza ukuphelisa oku njengengxaki.
Musa ukulayisha ngaphezulu isomisi okanye iitawuli azinakuba nendawo yaneleyo yokuba umoya ufikelele kwiitawuli ukuze ucofe ilaphu.
Sebenzisa iitawuli ezimbalwa kumthwalo ukunqanda ukulayisha ngaphezulu.
Phosa kwibhola yentenetya ecocekileyo okanye ezimbini ukuze uqhubeke nokukhulula iifayili zelaphu. Sebenzisa ubushushu obuphantsi okanye useto lokuntywila xa usebenzisa iibhola zentenetya.
Qinisekisa ukuba iitawuli zomile kakuhle ngaphambi kokuba zisuswe kwisomisi.
Gcina iitawuli zithambile kwaye ziFluffy xa ugcina
Nje ukuba iitawuli zakho zihlanjwe kwaye zomiswe, inyathelo lokugqibela lokuzigcina zithambile kwaye zinobushushu yindlela ezilungiselelwe ngayo ikhabethe yelinen kunye neeshelfu zokuhlambela.
Susa iitawuli kwangoko emva komjikelo wokomisa.
Vuthulula iitawuli ukuze zigcine zinombala njengoko imicu ipholile.
Sukuxinana kwaye upakishe iitawuli ezininzi kwenye kwiishelufa zokuhlambela nakwiimpahla zelineni.
Songa iitawuli ngendlela ihotele eyenzayo ngayo - kwisithathu (ubude obuphindiweyo, phinda isiqingatha kwakhona ngokuthatha ezantsi kwetawuli kwaye usonge phezulu, emva koko usonge kwisithathu).
Thatha ixesha kunye noKhathalelo
Ayithathi ixesha elininzi ukukhathalela iitawuli. Ukuba ulandela amanye okanye onke la manyathelo, unokuqinisekisa iitawuli zakho ukuba zihlala ixesha elide kwaye uzigcine zintle kwaye zithambile xa uziva zisetyenziswa.
Abantwana Clothing Stores Cat Expert Intliwanondlebe Umgangatho Iimbono Ukuhombisa I Icandles Igolide Izacholo
Uyixelela njani ilouis vuitton engeyiyo
Igama lomntwana oyinkwenkwe elikhethekileyo eliqala ngo k
amabali amafutshane abafundi bezikolo eziphakamileyo
Kunzima ukufumana imovie kwi-dvd